Warpinator: Faira Kugovana Pakati peGNU / Linux Remote Desktops | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uine akati wandei GNU / Linux makomputa akabatana pasi peiyo imwecheteyo network, ipapo ungangodaro uchida share mafaira nezvimwe zvikwata. Imwe sarudzo ndeye email, kutumira chinongedzo uye nekuzochizarura mune imwe, kana kuburikidza neyekunze ndangariro, uye kunyangwe kuburikidza nekuchengetedza gore. Asi kune dzimwe nzira dzakatowanda, senge kushandiswa kweWarpinator ...
Nechirongwa cheWarpinator iwe unenge uine yakapusa kushandisa, inokurumidza uye yakachengeteka chirongwa chekugovana mafaera pakati pematafura ari kure. Uye zvakare, hunhu hwayo hunoita kuti ive inokodzera kunyorera mudzimba, uye zvakare kune nyanzvi mumahofisi. Ingosarudza iyo yekuenda komputa (nezita rayo reneti, pasina kuziva iyo IP) uye iyo faira yekutumira (fomati kana saizi haina basa) uye ndizvozvo ...
Ehe, Warpinator hazvizokubatsire kutumira mafaira kure kure pamusoro peWAN seInternet. Chete kune emunharaunda maLAN network.
Kana iwe uchiziva iyo Yekupa chishandiso, zvinofanirwa kutaurwa kuti Warpinator iko kumisazve kuitisa kwayo, saka yakafanana chaizvo neiyo inowanikwa muUbuntu yakashandurwa kuLinux Mint. Nekudaro, kunyange Warpinator yakabatanidzwa muLinux Mint, inowanikwa mu flatpak mapakeji uye inogona kuiswa mune chero kumwe kugovera.
Chishandiso chakanakisa chauchadzivirira icho matambudziko kana zvasvika pakugovana zvinhu nekukurumidza. Kana makomputa akabatanidzwa kunetiweki uye achishanda, unogona kugovana chero chaunoda usingashandisi dzimwe nzira dzisinganyaradze sedzandambotaura pakutanga. Uye zvino nemusoro wenyaya we denda, iwe zvakare unodzivirira kusafanira kuenda kuhofisi uko imwe komputa iriko kuti ipe pendrive kana ndangariro, kana kuti mumwe munhu aifanira kuibata, nezvimwe.
Warpinator GitHub saiti
Dhawunirodha Warpinator Flatpak Universal Pack
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Warpinator: govera mafaera pakati pekunze GNU / Linux desktops
kudzamara chirongwa ichi chabatana nema-non-linux masystem hachizofambire mberi
Apostrophe: sangana nemupepeti weMarkdown uyu pasina zvinokanganisa